Mbola Velona Tsy Misy Toy Izany Ny Adin’ilay Poeta Aimé Césaire · Global Voices teny Malagasy
Mbola Velona Tsy Misy Toy Izany Ny Adin'ilay Poeta Aimé Césaire
MpanoratraAmadou Lamine Badji
Voadika ny 21 Jolay 2013 12:01 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Italiano, Français
[Mitondra amin'ny vohikala teny Frantsay avokoa ny rohy rehetra afa-tsy ireo izay voalaza manokana]
Ilay poeta malaza sady mafana fo avy ao Martinika Aimé Césaire [en] dia efa nanakaiky ny faha 100 taonany ny 26 Jona 2013 raha mbola velona teo. Ao anatin'izao fanatontoloana gaboraraka amin'ny vanim-potoanantsika izao, ny fitsingerenan-taonan'i Césaire dia fotoana iray nahafahana nanokana fahatsiarovana ho an'ilay tompon-dakan'ny fanoherana ny fanjanahana an'ireo olona avy ao Afrika, Hetsika ho an'ny Négritude : hetsika iray natao ho an'ny tontolo mivelatra kokoa, ahafahan'ny olona hatrany ivelan'ny sisintany sy kaontinanta rehetra mitovy sy mivezivezy, ary anatin'izany rehetra izany ny fiarovana sy ny fikolokoloana ny kolontsain'ny tsirairay avy.
Toy ny lasa zavatra iainana marina 80 taona aty aoriana ny fomba fijeriny tamin'ny taona 1930 niaraka tamin'ireo izay nikatsaka ny fanajana ny fahasamihafan'ny kolontsainy. Ankehitriny, efa ho ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao no miady amin'io fanavakavaham-bolonkoditra io ary tena ahitam-bokany tokoa. Kanefa, mbola misy ihany ny tsy rariny, ny fanapahan-kevitry ny fitsarana mikasika ny fahafatesan'i Trayvon Martin izao dia porofon'izany [en].
Trayvon Martin tao amin'ny wikipedia CC-BY-3.0
Ankehitriny, voahosihosy amin'ny fomba hafa indray ny maha-olombelona, toy ny fahasarotan'ny toekarena sy ny manodidina azy, ka ilàna ny hanomezana vahana indray ny fijerena akaiky ny asan'ireo mafana fo taloha niadian'izy ireo tamin'ny famoretana. Ho fanajana ny tolon'ilay mafana fo, mpanoratra ary mpikambana tao amin'ny fanoherana frantsay, Stéphane Hessel, dia nahasarika hetsika toa ireo Fitroarana Arabo sy ny hetsi-panoherana tany Brezila sy Eoropa.
Ity manaraka ity ny jeritodiky ny fiainan'i Aimé Césaire nataon'i Yao Assogba, mpampianatra sosiolojia ao amin'ny Oniversiten'i Quebec :
Teraka tao Martinika ny 26 Jona 1913 i Aimé Césaire, ilay poeta sady politisiana, ary nodimandry tao amin'ny tany nahaterahany ny 16 Aprily 2008 teo amin'ny faha 94 taonany. Antso lehibe ho fanoherana ny fibodoan'ny mpanjanaka ny asa-soratr'i Césaire. Fitaovana niadiana nanoherana ny fanaovan'ny Eoropeana mpanjanaka ny vahoaka mainty ho toy ny “zavatra” no sady fanilon'ny fialàn'ny fanjanahan'ny Eoropeana any Afrika ny asa-sorany, izay sady asa soratra no sosiolojika. Anjombona natao ho amin'ny fialan'ny fanjanahana any Afrika sy fanarenana indray ny Kolontsain'ireo Afrikana mainty hoditra ny antsony. Mba ahafahana mankasitraka tsara ny lazan'i Aimé Césaire, tompon-dakan'ilay hetsika”negritude” tamin'ny fanesorana ny fanjanahana sy ny fahaterahan'i Afrika sy ny Inda Andrefana indray taorian'ny Ady Lehibe Faharoa, dia ilaina ny fakan'ny tsirairay an-tsaina ny toerana nisy ny fanjanahana tamin'izany fotoana izany.
Nanampy toy izao i Noel Kodia tao amin'ny vohikala panafrikana Le Pangolin Afrik :
Taorian'ny fahitana ny literatiora tao Martinika, tao amin'y Lisea Lycée de Fort de France sy tao Louis-le-Grand tao Parisy, no nananganany ny “L’Etudiant noir” [Ilay Mpianatra Mainty Hoditra] niaraka tamin'i Léopold Sédar Senghor ary Léon-Gontran Damas ny taona 1939 izay niseho ho toy ny tohin'ilay gazetiboky “Légitime défense” [Fiarovan-tena] tamin'izany fotoana izany. Tamin'io taona io ihany no nivoahan'ilay “Cahier d’un retour au pays natal” [Taratasy Fiverenana an-tanindrazana], toy ny fanambaràna ny fiverenana ao an-tanàna miaraka amin'ny fomba fiteny mahamay sy masiaka izay nihamafy tao amin'ilay “Discours sur le colonialisme” [Lahateny momba ny fanjanahantany]. Miresaka momba ny làlana nodiavin'ilay poeta mainty hoditra ilay lahatsoratra, manoloana ny anjarany amin'ny maha zanatany azy. Ny hatezeran'ilay olo-malaza no tena hozatry ny resaka amin'ilay “Discours sur le colonialisme”. Tao anatin'izany fanehoany hatezerana izany, tsy mitondra ny tenany ho toy ny zanaky ny sasany amin'ireo fanjakàna Afrikana toa ny Dahome sy Ghana izy.
Izay voasoratra momba an'i Aimé Césaire ao amin'ny Panthéon ao Parisy, Frantsa ao amin'ny Wikipedia -sehatra ho an'ny daholobe
Aimé Césaire sy ny ady ho amin'ny hasin'ny olombelona
Nicole tao amin'ny médiapart dia nanoratra ireo fanamby tsy maintsy natrehan'i Césaire nandritry ny fiainany :
Tsy notohanan'ny Académie Française ny asa-soratr'i Aimé Césaire– izay amin'ny ankapobeny dia avy amin'ny elatra havanana mpithiry lolompo amafisin'ny marina itompoany sy tsy mandà ny fametrahana ny sivilizasiona nentiny tany amin'ireo zanantany, zavatra izay naverimberin'i Aimé Césaire nampangaina tamim-panajana sy tamim-pahamatorana hatrany. “…Naleon'ny frantsa ondry bory naka an'i Senghor, noho ny teny malefaka ataony, ny toraka voninkazony, ny poeziany, ny fahaizany maka tàhaka an'i Claudel, maivana sy mahatsiravina; ny fisolelahany sy ny fideran'ny hafa azy tsy misy saina , toraky izany ihany koa ny fandrosoan'izao tontolo izao, ary ireo metisin'ny Frankofonia. Manao ny fomban'ny frantsay hiringiriny, mitroatra, nalaina avy amin'i Alioune Diop novolosana velona, Gontran-Damas, avy aminà Césaire…hijanona ho fahatsiarovana ratsy ho an'ny taonjato faha 20 i Aimé Césaire– ho an'ireo taranaka izay hitondra zavatra mifanohitra amin'izay nandrandrainy ho an'izao tontolo izao. Nandray anjara tamin'ny tolom-panavaozana rehetra tamin'izany fotoana izany izy. Namoaka boky tamin'ilay “Discours sur le colonialisme” izy, izay isan'ny marina sy mahery raha mikasika io lohahevitra io. Niady ho amin'ny filazana ny marina mikasika io rafitra io izy. Izy no mpanoratra nahazo tombondahiny be indrindra, olombelona mahitsy sy tia mizara…Cesaire no lesona iray amin'ny fahamendrehana, leson'ny fitiavana ny teny Frantsay, mpanoratra ngezalahy, mpanoro lalàna, sekolin'ny fomba fisainany azy manokana; izy, tena lafatra tanteraka, asa-soratra tena hiringiriny marina — marika iray.
Ity manaraka ity ny lahatsary ahitàna ny heviny mikasika ny fanjanahana novakian'i Thymslab :
Mba ahafahana mametraka ny fomba fijerin'i Césaire ao anaty tantara, dia ilaina ny hevitry ny mpahay tantara toa an'i Alain Mabanckou, Prix Renaudot 2006, izay nohadihadian'i Grégoire Leménager tao amin'ilay blaogy le Pangolin :
Alain no endrika hita maso misahana ny asan'ny mpisava lalana ho amin'ny fandinihan-tena manokana ary amin'ny fomba mahatsikaiky. Namely fijery raiki-tampisaka ny taloha sy ankehitriny izy tamin'ny fanehoany ny toe-javatra samy hafa iainan'ireo Olona mainty hoditra araky ny toerana misy azy. Ny mainty hoditra avy ao Amerika ohatra, dia malalaka kokoa amin'ny fitakiany ny maha olom-pirenena azy noho ireo izay ao Frantsa, ary samy hafa ny fijery an'ireo Afrikana Tandrefana sy ny avy ao Afrika Afovoany amin'ny fomba fijerin-dry zareo ny tantarany sy ny fiparitahan'izy ireo manerana izao tontolo izao ankehitriny.